ဗိသုကာလက်ထောက်အစီရင်ခံစာများမော်ကွန်းတိုက် - ဝေဒ Planetarium ၏ဘုရားကျောင်း
အမျိုးအစားမှမော်ကွန်းတိုက် "ဗိသုကာ Dept. အစီရင်ခံစာများ"
TOVP ဗိသုကာဌာနအစီရင်ခံစာ - အရှိန်ကိုကောက်သည်
စစျပှဲ, 04, 2021 က Vilasini ဒေဝီ Dasi
Staircase Towers များအပြင်ပိုင်းနှင့်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းနှင့်ဆောင်ရွက်မှုများတွင်တိုးတက်မှုများစွာပြုလုပ်ထားသည်။ လှေကားထစ်မျှော်စင်များနှင့်ဆက်စပ်သောအလင်းရောင်၊ အ ၀ တ်၊ အဆင်တန်ဆာ၊ jalis စသည်ကဲ့သို့ကွဲပြားသောပညာရပ်များနှင့် ဆက်စပ်၍ အတွင်းကျကျအရာများအားဖမ်းယူနိုင်ခဲ့သည်။ တည်ဆောက်မှုပုံစံများပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှပုံများသည်အောင်မြင်ရန်အတွက်ညှိသည်
ထုတ်ဝေသည် ဗိသုကာ Dept. အစီရင်ခံစာများ
အောက်တွင် tag လုပ်ခဲ့သည် အပတ်စဉ်အိမ်တွင်းတိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာ
TOVP ဗိသုကာဌာနမှ Pankajanghri Prabhu Memoir
နှင်း, ဇွန် 27, 2021 က Vilasini ဒေဝီ Dasi
အထူးစိတ်ဝိညာဉ်ကိုဂုဏ်တင်ရန်သင့်တော်သောအချိန်သည်အမြဲတမ်းဖြစ်သည်။ ငါတို့ချစ်သောပန်ကဂျီဟီပရာဘူхуသည်ဤကမ္ဘာဂြိုဟ်မှထွက်ခွာသွားသည်မှာတစ်လကျော်သွားပြီဖြစ်သည်။ သူ၏အမှတ်တရများနှင့် TOVP အပေါ်ထားရှိသောပံ့ပိုးမှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားနှင့်ဤအထင်ကရအဆောက်အ ဦး ၏နံရံများတွင်ထာဝရစွဲမြဲနေသည်။ TOVP အဖွဲ့ ၀ င်များသည်ဒီဇိုင်းနှင့်
TOVP - ဘုရားကျောင်းဒီဇိုင်းနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများ၏အဖြေ
လာ, ဇွန် 07, 2021 က Sunanda Das
YouTube တွင်အတော်အတန်ပျံ့နှံ့နေသော Vedic Planetarium ၏ပြီးပြည့်စုံသောဘုရားကျောင်းအတွင်းကြည့်ရှုသည့်ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသော TOVP ဗီဒီယိုတစ်ခုတွင်ဗိမာန်တော်၏ဒီဇိုင်းသည်ဗလီတစ်ခုနှင့်တူသည်ဟုဥရောပသို့မဟုတ်အနောက်တိုင်းခံစားမှုရှိသည်ဟုမှတ်ချက်များစွာပေးခဲ့သည်။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသို့မဟုတ်ဘုရားကျောင်းထက်ဝေဒအလေးပေး။
TOVP ဗိသုကာဌာန၏အစီရင်ခံစာ - ယခုနှင့်လာမည့်
စ, မ 20, 2021 က Vilasini ဒေဝီ Dasi
လက်ရှိနှင့်အနာဂတ်အလုပ်များ - ၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီ - ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ယခုဗိသုကာဆိုင်ရာ ဦး စီးဌာနတွင်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများကိုမှတ်တမ်းတင်နေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆောက်အ ဦး ၀ င်ပေါက်ရှိခမ်းနားသောလှေကားထစ်များ၏နင်းခြင်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကိုးကွယ်သူများ၏အောက်ခြေတွင်နင်းနင်းနင်းနိုင်သည့်အရွယ်အစားသည်အလွန်အဆင်ပြေပါသည်။ မကြာခင်မှာပဲအဲဒါကိုကျွန်တော်တို့အကောင်အထည်ဖော်တော့မှာပါ
TOVP Architecture Department 2020 အစီရင်ခံစာ
ဂါ, ဇန်နဝါရီ 26, 2021 က Vilasini ဒေဝီ Dasi
တူးစက်များ၊ တူများနှင့်စကျင်ကျောက်များ၏အသံ။ စိုစွတ်သောကွန်ကရစ်အနံ့နှင့်ကျောက်တုံးများဖြတ်တောက်ခြင်း။ ငြမ်းပန်းခြင်းနှင့်အလုပ်များနေသောသံခမောက်များသည်အပြာရောင်အမိုးခုံးများကြားတွင်ပုရွက်ဆိတ်များ၏လှုပ်ရှားမှုနှင့်တူသည် - အားလုံးမသေချာမရေရာသောရပ်တန့်သွားသည်။ အစီအစဉ်ကိုစီစဉ်ပါ ... ပြီးရင်ကွပ်ပါ။ ကောင်းမွန်စွာစီစဉ်ထားသောအလုပ်သည်အလုပ်၏ထက်ဝက်ဖြစ်သည်။ ခြားနားချက်
TOVP Architecture Dept Report၊ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ - မျက်နှာကျက်စီမံကိန်းများ
ဟူးနိုဝင်ဘာ ၄ ရက်၊ က Vilasini ဒေဝီ Dasi
လွန်ခဲ့သောလပေါင်းများစွာကကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမားသောအာကာသပမာဏ၏စည်းလုံးစေသောအချက်တစ်ခုဖြစ်သည့်မျက်နှာကျက်ဒီဇိုင်းများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုများစွာကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်။ မတူကွဲပြားသောပစ္စည်းများလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုတွင်၎င်း၏ရှုပ်ထွေးသောထွင်းထုထားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အတူ၎င်းသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအနုပညာဇာတ်ကြောင်းကိုဖန်တီးသည်။ ဒီဗေဒအမိုးအကာအတွင်း၌မရေမတွက်နိုင်သောဝန်ဆောင်မှုများရှိသည်။ အနုပညာကိုရောနှောနေခြင်း
ထုတ်ဝေသည် ဗိသုကာ Dept. အစီရင်ခံစာများ, အနုပညာ၊ ဗိသုကာနှင့်ဒီဇိုင်း
TOVP Architecture Dept Report, 2020ဂုတ် ၂၀၂၀ - Nrsimhadeva Wing Progress
ကြာ, စကျတငျဘာ 24, 2020 က Vilasini ဒေဝီ Dasi
Bhakti ၏ဖြစ်စဉ်သည်ဘဝအကြောင်းများစွာသင်ပေးသည်။ ခရီးသည်ပန်းတိုင်ကဲ့သို့အရေးကြီးသည်။ စီမံကိန်းကိုသာမကငါတို့၏ပြည်တွင်းတိုးတက်မှုကိုပါပံ့ပိုးပေးသော 'ဇာတ်လမ်း'၊ 'ဖြစ်စဉ်' နှင့် 'ခရီး' ကိုမျှဝေရန်ယခုကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်လိမ့်မည်။ သင်၏ဘရောင်ဇာတွင်ကြည့်ရှုရန်မိတ္တူကူးယူရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ
TOVP ဗိသုကာဌာန၏အစီရင်ခံစာ၊ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ - The Making in
လာ, ုတ်ဂုတ် 24, 2020 က Vilasini ဒေဝီ Dasi
'Lock down' သည်ဤကပ်ရောဂါအတွင်းပထမဆုံးထွက်ပေါ်လာသောနာမဝိသေသနဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်သူတည်ထောင်သူ Acharya ၏အိပ်မက်စီမံကိန်းအတွက်အဖြေမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကိုသေချာစေရန်ဤစိန်ခေါ်မှုကာလ၏နေ့ရက်တိုင်းကိုဗိသုကာစားပွဲများတွင်အသုံးပြုထားသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးမတိုင်မီနိဂုံးချုပ်လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်သည်
အောက်တွင် tag လုပ်ခဲ့သည် stapathi, အပတ်စဉ်အိမ်တွင်းတိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာ
TOVP Architecture Department Report - ဇွန်လ၊ ၂၀၂၀၊
ဂါ, ဇူလိုင် 07, 2020 က Vilasini ဒေဝီ Dasi
သော့ခတ်ထားခြင်းကအသင်း၏စိတ်ဓာတ်ကိုဟန့်တားနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာပါသည်။ 'နတ်ဘုရားများကိုသူတို့၏နေအိမ်များသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်း' သည်ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်တစ် ဦး ချင်းနှင့်စုပေါင်းထည့် ၀ င်မှုများကိုရယူခြင်း။ ကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးကာလတလျှောက်လုံးအဖွဲ့သည်၎င်းကိုဖြစ်ပျက်စေရန်အားထုတ်ကြိုးပမ်းသည်။ ကြည့်ရှုရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
အောက်တွင် tag လုပ်ခဲ့သည် အတွင်းပိုင်း, အပတ်စဉ်အိမ်တွင်းတိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာ